खोप लगाएपछि - This Is Our Shot Canada
मैले खोप लगाएपछि पनि के मलाई कोभिड-१९ हुन सक्छ वा मैले अन्य व्यक्तिलाई कोभिड सार्न सक्छु?
हामी निश्चितताका साथ भन्न सक्दैनौँ तर तपाईंले खोप लगाएपछि पनि तपाईंले भाइरस सार्ने सम्भावना हुन्छ। खोपले भाइरसबाट बिरामी हुनबाट मानिसहरूलाई सुरक्षित गर्ने छ भन्ने हामीलाई थाहा छ तर तपाईंले आफ्नो प्रतिरक्षण प्राप्त गरेपछि पनि तपाईंमा भाइरस हुन सक्ने र त्यसलाई अन्य व्यक्तिहरूमा फैलाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। क्लिनिकल परीक्षणहरूको निरन्तरता र वास्तविक संसारबाट आउने प्रमाणमार्फत हामीले थप जान्ने छौँ। यस अवधिमा, धेरैजसो क्यानेडालीले पूर्ण रूपमा खोप नलगाउञ्जेल हामीले मास्क लगाउन जारी राख्न, भौतिक दूरी कायम राख्न र सार्वजनिक स्वास्थ्यका सिफारिसहरूका पालना कायम राख्न आवश्यक हुने छ।
मैले खोप लगाएपछि प्रतिरक्षण प्राप्त गर्न कति समय लाग्ने छ?
खोपको दोस्रो खुराक लगाएपछि शरीरमा प्रतिरक्षा निर्माण गर्न लगभग दुई हप्ता लाग्छ। केही व्यक्ति खोप लगाउनुअघि वा लगाएपछि तुरन्तै भाइरसबाट संक्रमित हुन र बिरामी हुन सक्छन् ’cause खोपले सुरक्षा प्रदान गर्नका निम्ति पर्याप्त समय नपाएकाले यस हुन सक्छ।
त्यसकारण खोपहरूको पूर्ण दुई खुराक लगाउन आवश्यक छ।
खोपका खुराकहरूबीच ठूलो अन्तराल भएपनि खोपले काम गर्ने छ र? खोपको पहिलो र दोस्रो खुराकबीच4महिनाको अन्तराल ठीक छ भन्ने कुरा हामीलाई कसरी थाहा भयो?
कोभिड-१९ का खोपहरूको प्रारम्भिक प्रभावकारिता पहिलो खुराकपछि नै धेरै (80-92%) हुन्छ र कम्तीमा केही महिनासम्म रहन्छ।
बहुखुराकहरूको रूपमा दिइने अन्य खोपहरूबाट प्राप्त अनुभवले के बताउँछ भने सिङ्गो खुराकले छः महिना वा यसभन्दा बढी समयसम्म निरन्तर सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ। वास्तवमा, धेरै अध्ययनहरूले यो देखाएका छन् कि तपाईंले जति बढी प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ, दोस्रो खुराकले तपाईंको प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई त्यति नै राम्रो बनाउँछ। यसकारण यो भन्न सकिन्छ कि यस तथ्यको वैज्ञानिक आधार छ।
अनि अधिकांश खोपहरूको मामिलामा, एन्टिबडीका स्तरहरू (प्रतिरोधात्मक क्षमता) कम्ती हुनुको लागि निकै समय लाग्छ अनि ती सुरक्षात्मक स्तरहरूबाट अचानक तल झरेर जाँदैनन्। महिनौं वा वर्षौं पश्चात् पनि, खोपको अर्को खुराकले प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बढाएर उच्च स्तरहरूसम्म पुर्याउन सक्छ, अनि अधिक समयसम्म सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ।
अहिले क्यानडामा खोपको आपूर्ति औधी नै भरपर्दो भएको हुनाले, दुइ खुराकहरू बीचको अन्तराललाई घटाएर आठ साता परिएको छ।
मैले खोप लगाएपछि पनि मास्क लगाउनु र दूरी कायम राख्नु पर्ने छ र?
हो, अहिले घडी अर्थात् क्यानडाको जन-स्वास्थ्य एजेन्सी (Public Health Agency of Canada)-ले सही समयको निर्धारण नगरूञ्जेल मास्क (मुकुन्डो) लगाउनु र सामाजिक दूरी कायम राख्नु आवश्यक छ। यसको कारण के हो भने, खोपलाई प्रभावकारी हुनु (प्रतिरोधात्मक क्षमताको निर्माण गर्नु) कैयौं साताहरूको समय लाग्छ तथा यथाःसम्भव अधिकभन्दा अधिक मानिसहरूलाई फाइजर-बायोएनटेक (Pfizer-BioNTech), मोडेर्ना (Moderna) अनि एस्ट्राजेनेका (AstraZeneca) कोभिड-१९ खोपहरूको दोस्रो खुराक लगाउने प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै अधिकतम सुरक्षा हासिल गर्न सकिनेछ।
खोपको सुरक्षा कति समयसम्म रहने छ?
हामीलाई खोप लगाएको व्यक्ति कति समयसम्म सुरक्षित रहन सक्छ भन्ने अझै थाहा छैन। mRNA खोपहरूका हालैका अध्ययनहरूले कोभिड-१९ को खोप लगाइएका मानिसहरूमा कम्तीमा छ महिनासम्म अति बलियो प्रतिरक्षा भएको देखाउँछ। प्रतिरक्षा केही समयसम्म रहेको देखिन्छ तर यसमा समयअनुसार अध्ययनहरू गर्नु आवश्यक छ।
प्रतिरक्षा एक वर्ष वा दश वर्षसम्म रहने छ कि छैन वा कुनै समयमा प्रतिवर्धक खुराक (प्रतिरक्षा बढाउने) लगाउनु आवश्यक हुने छ वा छैन भन्ने कुरा ’bout हाल हामी निश्चित छैनौँ।
खोपले कहिलेबाट काम गर्न सुरु गर्छ?
कोभिड-१९ को खोप लगाएपछि शरीरमा प्रतिरक्षा निर्माण हुन प्रायः जसो केही हप्ता लाग्छ। तर Pfizer- BioNTech, Moderna र AstraZeneca कोभिड-१९ खोपहरूबाट उत्कृष्ट प्रतिरक्षा प्राप्त गर्नका लागि खोपका दुई खुराक आवश्यक छन् भन्ने कुरा सम्झनुहोस्। Johnson & Johnson कोभिड-१९ खोपको एक खुराक मात्र आवश्यक छ।
कोभिड-१९ खोपका सामान्य साइड इफेक्टहरू के-के छन्? मैले कति बेला चिन्ता गर्नु पर्छ?
खोप लगाएपछि निम्नलिखित सहित अस्थायी रूपमा हलुका वा मध्यम खालका साइड इफेक्टहरू देखिनु सामान्य हो :
खोप लगाइएको ठाउँमा दुख्ने, रातोपन हुने, तातोपना हुने, चिलाउने वा सुन्निने
मांसपेशी वा जोर्नी दुख्ने र
हलुका ज्वरो आउने वा अति चिसो लाग्ने।
तपाईंको शरीरमा सुरक्षा निर्माण भइरहेको छ भन्ने ’bout यी सामान्य सङ्केतहरू हुन् र यी लक्षणहरू केही दिनमा हराउँदै जान्छन्।
तपाईंका लक्षणहरू गम्भीर र खराब हुँदैछन् भने आफ्नो स्वास्थ्य स्याहार प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्। लक्षणहरू कोभिड-१९ का जस्तै छन् भने तपाईंले जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ र जाँचका नतिजाहरू नआएसम्म आइसोलेसनमा बस्नु पर्ने हुन्छ।
एनाफिलेक्सिस (anaphylaxis) भनिने एकदमै गम्भीर साइड इफेक्ट अति विरलै हुन सक्छ। यो सामान्यतया खोप लगाएको केही मिनेटमा वा एक घण्टामा हुन्छ। यस कारण कोभिड-१९ खोप लिने मानिसहरूलाई खोप लगाएपछि कम्तीमा 15 मिनेटसम्म त्यही बस्न अनुरोध गरिन्छ, ताकि स्वास्थ्य स्याहार कर्मचारी टोलीले कुनै गम्भीर प्रतिक्रिया उत्पन्न हुने सन्दर्भमा उक्त व्यक्तिको निगरानी गर्न सक्नुहुन्छ।
मलाई कुनै पनि साइड इफेक्ट नभएमा मैले चिन्ता लिनु पर्छ र? के यसको अर्थ खोपले काम गरेन भन्ने हो?
खोपले काम गरिरहेको छ वा छैन भन्ने सङ्केत साइड इफेक्टहरू होइनन्।
खोपले काम गरिरहेको छ र तपाईंको शरीरमा प्रतिरक्षा निर्माण भइरहेको छ भन्ने सामान्य सङ्केतहरू साइड इफेक्टहरू हुन् भन्ने कुरा सत्य हो। तर, यसको अर्थ तपाईंलाई साइड इफेक्टहरू नभएमा चिन्ता गर्नुपर्छ भन्ने होइन। उदाहरणका लागि, mRNA खोपहरूले क्लिनिकल परीक्षणहरूमा खोप लगाएका 90% भन्दा धेरै व्यक्तिहरूमा सुरक्षात्मक प्रतिरक्षा प्रदान गर्‍यो भने 50% भन्दा बढीमा कुनै साइड इफेक्ट देखिएको थिएन। अर्थात् धेरैजसो मानिसहरूले खोपको कुनै पनि प्रतिक्रियाबिना पूर्ण प्रतिरक्षा प्राप्त गर्नुभयो।
त्यस कारण, तपाईंले कोभिड-१९ को खोप लगाएपछि कुनै पनि साइड इफेक्ट महसुस गर्नु भएन भने, यस ’bout चिन्ता लिनु पर्दैन—तपाईं साइड इफेक्ट महसुस गर्ने व्यक्ति सरह नै सुरक्षित हुनुहुन्छ!